မန်းကိုကို ~ Mahn Ko Ko: ♦♣ ဆွဲထုတ်မိသမျှ ရွေးကောက်ပွဲအပိုင်းအစ ♠♥
ဘယ်သူတွေဘယ်လိုပဲဆိုဆို မကြာခင်မှာကျင်းပဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ရှားရှားပါးပါးရွေးကောက်ပွဲက
တော့ လုပ်ဖြစ်ဖို့နဲ့ လက်ရှိအာဏာဆုပ်ကိုင်ထားသူတွေကနေပြီး သူတို့လိုချင်တဲ့အဖြေကိုရအောင်အစွမ်း
ကုန်ကြိုးစားသွားမှာကတော့ လယ်ပြင်မှာဂေါ်ဇီလာသွားသလို အထင်အရှားနဲ့သေချာသလောက် ရှိနေ
ပါပြီ။ အချိန်နီးကပ်နေပြီး ငွေ၊ အာဏာ၊ လက်နက်တွေနဲ့ထောင့်စေ့အောင် ကျိုးစားကာကွယ်ထားတဲ့
ဒီရွေးကောက်ပွဲကို ရလဒ်ပြောင်းသွားအောင် ဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရနိုင်တော့ဖူးလို့ ထင်သူတွေရှိနိုင်ပါ
တယ်။ ပြောင်းလဲလို့ရနိုင်ကောင်းမှရနိုင်မှာဖြစ်ပေမယ့် ကျိုးစားချင်သေးသူတွေ၊ နောင်အတွက် အသင့်
ပြင်လိုသူတွေအတွက်တော့ လွယ်လွယ်ကူကူစုစည်းလို့ရနိုင်သမျှအချို့ကို တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲကိုကြည့်ရင် ဒါဟာပြည်သူ့သဘောထား ကောက်ခံချက်တစ်ရပ်၊ တနည်းအားဖြင့်ပြည်
သူတွေကိုကိုယ်စားပြုသူတွေရွေးချယ်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်ဆိုတာ သတိပြုမိကြပါလိမ့်မယ်။ ပထမဆုံး
ဥပဒေပြုပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုရွေးကောက်မယ်၊ အဲဒီအထဲကမှအစိုးရဖွဲ့ပြီး နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်
တဲ့အာဏာပိုင်အဖွဲ့ဖြစ်လာပါမယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ရင် လက်ရှိအာဏာရှင်တွေဟာမြန်မာပြည်ကို သူ
တို့အုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့ ပြည်သူတွေရဲ့သဘောတူခွင့်ပြုချက်လိုတယ် (သို့မဟုတ် ဟန်ဆောင်ရယူဖို့လိုတယ်)
ဆိုတာကိုလက်ခံတယ်လို့ ရှင်းရှင်းကြီးအဖြေထွက်နေပါတယ်။ ဒီတော့ကာ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်
လို့ ဘယ်စံဘယ်ပုံထဲဝင်နေတယ်၊ ဦးတည်ရာနဲ့ လုပ်ကိုင်လို့ရမှာတွေစသည်ဖြင့် ချိန်ထိုးတွေးကြည့်ကြ
ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တယ်ဆိုတာ ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့ အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကို အကောင်အထည်ဖေါ်တာပါ။
ဒီမိုကရေစီစနစ်ဘယ်မှာစခဲ့သလဲ။ ရောမကနေစခဲ့တယ်လို့ အလောသုံးဆယ်ဖြေသူတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။
မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဂျာမဏီကနေလှိမ့်ဝင်လာတဲ့ Goth အပါအဝင် ဂျာမန်မျိုးနွယ်စုတွေကြောင့် အ
မှောင်ခေတ်လို့ခေါ်တဲ့ကာလရောက်ရှိခဲ့ရပြီး ဒီစနစ်လည်းပျောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီစနစ် ဒုတိ
ယအကြိမ်ပြန်လည်အသက်ဝင်လာဖို့ရာမှာ ဥရောပကနေ အထူးသဖြင့်အင်္ဂလန်မှာ Magna Carta လို
ဒီမိုကရေစီဘိုးအေလို့ခေါ်နိုင်မယ့် စာတမ်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီး အစတည်ခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးတော့ ကမ္ဘာ့
သမိုင်းကို တစ်ဝက်တပျက်လောက်ပဲသင်ကြားတာခံခဲ့ကြရတဲ့ မြန်မာပြည်သားအချို့အနေနဲ့ သိနိုင်ဖို့
မဟုတ်ရင်လည်း သတိထားမိဖို့ အခက်အခဲရှိနိုင်ကြပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ တွေးစရာပေါ်လာတာက မြန်မာပြည်စစ်အာဏာရှင်အဆက်ဆက် (မဆလ၊ နဝတ၊
နအဖ) တို့ကနေ အနောက်နိုင်ငံများရဲ့တိုးတက်မှုကိုအားကျသူနဲ့ ဆက်စပ်ပတ်သက်နေသူများကို “နယ်
ချဲ့အားကိုး ပုဆိန်ရိုး” လို့ဆိုထားတာလူတိုင်းအသိပါ။ ဒီတော့ အဲဒီနိုင်ငံတွေကနေတဆင့် အတုယူရ
တာဖြစ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုတည်ထောင်မယ်ဆိုရင် ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေဟာ သူတို့ပြောတဲ့ပုဆိန်ရိုး
တွေများ ကိုယ်တိုင်ဖြစ်မသွားဖူးလားလို့ပါ။ လစ်ဘရယ်၊ ဆိုရှယ်လစ်၊ ရှေးရိုးစွဲစတဲ့ ကြံ့ဖွံ့အပါအဝင်
နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ကင်းလို့မရတဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာသန္ဓေတည်ခဲ့တဲ့ ဝါဒတွေအကြောင်းပါပြော
ဒါတင်မကသေးပါဘူး။ အထက်တုန်းကပြောခဲ့သလို ပြည်သူ့ဆန္ဒသဘောထားကောက်ယူတယ် ဆို
တာလည်း “လူလူချင်းတန်းတူပဲ၊ အုပ်ချုပ်သူတွေဟာ ပြည်သူတွေရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့အုပ်ချုပ်ရမယ်၊
ပြည်သူအများစုလက်ခံမှသာ အုပ်ချုပ်မှုတွေဟာတရားဝင်တယ်၊ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာမှာအကန့်အသတ်
ရှိတယ်” စတဲ့ ခေတ်အဆက်ဆက်တွေးခေါ်တည်ဆောက်လာခဲ့တဲ့ အနောက်တိုင်းအတွေးအခေါ်တွေ
ရဲ့အပေါ် အခြေခံထားတာပါ။ ဒါတွေဆက်ပြောရင် အာဏာရှင်တွေရှက်ရမ်းရမ်းပြီး မြန်မာပြည်မှာရှိခဲ့
တဲ့အစဉ်အလာအတိုင်း ပဒေသရာဇ်စနစ်ကို ပြန်လှည့်သွားနိုင်တယ်လို့တောင်စိတ်ပူရမလိုဖြစ်နေပါ
တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလူတွေဒီလောက်နဲ့တော့ ရှက်မယ့်ပုံမပေါ်ပါဘူး။
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေအားလုံးလိုလိုမှာ အင်္ဂါရပ်တစ်ခုအနေနဲ့တွေ့နိုင်တာကတော့ တစ်ကဏ္ဍနဲ့တစ်
ကဏ္ဍ ချိန်ခွင်လျှာတွေအနေနဲ့ထိန်းညှိပေးထားတဲ့ အာဏာပိုင် ၃ ရပ်ဖြစ်ကြတဲ့ -
(၁) အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးကိုကိုင်တွယ်တဲ့ အစိုးရအဖွဲ့၊
(၂) ဆွေးနွေးအဆိုပြုဥပဒေပြဋ္ဌာန်းမဲ့ လွှတ်တော်တွေ၊
(၃) ဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအာမခံမယ့် တရားရေးကဏ္ဍတို့ပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ပြည်သူလူထုရဲ့သဘောထားအပေါ် သြဇာညောင်းနိုင်မယ့် သတင်းနဲ့စာနယ်ဇင်းကဏ္ဍကို
တော့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့ စတုတ္ထအုတ်မြစ်ရယ်လို့ ဒီဘက်ခေတ်မှာအဆိုပြုလှုပ်ရှားနေစေကြပါပြီ။ ဒါ့ပြင်
ဒီကနေ့အိန္ဒိယလိုနိုင်ငံမှာဆိုရင် လာဟ်စားမှုကင်းဝေးရေးကို ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့ပဉ္စမအုတ်မြစ်ဆိုပြီး
ဆော်သြလာကြတဲ့အနေအထားအထိ ရောက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ စနစ်တိုင်း၊ ဝါဒတိုင်းဟာ ခေတ်
နဲ့အညီတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းနေကြတဲ့ ပြယုဂ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ်နဲ့ ပြောင်း
လဲတိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်သမိုင်း မရှိသလောက်ဖြစ်တဲ့မြန်မာပြည်မှာ စည်းကမ်းပြည့်ဝသောဒီမိုကရေစီရယ်
လို့ တီထွင်သွတ်သွင်းဖို့ကျိုးစားတာကတော့ အရင် “မြန်မာ့နည်းမြန်မာ့ဟန် ဆိုရှယ်လစ်စနစ်” လိုပဲ
လိုရာဆွဲလုပ်ရပ်တစ်ခုပါ။ (နောင်မှပဲ အာဏာရှင်တွေတီထွင်ခဲ့တဲ့ ဟန်ပြဒီမိုကရေစီစနစ်အချို့ကို တင်
နောက်ဆုံးအရေးကြီးတဲ့ နိုင်ငံရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ ဋ္ဌာနအဖုံဖုံပါဝင်တဲ့
အုပ်ချုပ်ရေးယန္တယားပဲဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးနဲ့မဆိုင်သလိုဖြစ်တည်ရှိနေပေမယ့် ဒီယန္တယားကြီးကနေ
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ကံကြမ္မာကို အများကြီးလမ်းကြောင်းပေးနိုင်တဲ့ စွမ်းအားတွေရှိနေပါတယ်။ (ဒီမိုကရေစီ
ထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံများမှာတော့ ဝန်ထမ်းတွေဟာ အစိုးရအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာ လုပ်ကိုင်နေကြရပေမယ့်
သူတို့ကိုယ်ကိုပြည်သူကြားက ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေဆိုတာ နားလည်ကြပါတယ်။ ပြည်သူလူထုအကျိုးကို
အထက်က ကဏ္ဍတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် လက်ရှိစစ်အာဏာရှင်များကနေ အစိုးရအဖွဲ့၊ တရား
ရေး၊ သတင်းစာနယ်ဇင်းကဏ္ဍနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တယားတွေကို ချုပ်ကိုင်လွှမ်းမိုးထားတာတွေ့ကြရပါ
မယ်။ ဒီတော့ နောက်ဆုံးလက်ကျန်ဖြစ်တဲ့ ဥပဒေပြုကဏ္ဍ (လွတ်တော်တွေ) ကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ပြီး
လက်ရှိရထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကို တရားဝင်ဖြစ်အောင်၊ ကမ္ဘာကလည်းလက်ခံလာအောင် တည်
ဆောက်ဖို့ကျိုးစားနေတာ အထင်အရှားပါပဲ။ ပြည်သူတွေအတွက်တော့ တစ်ခုတည်းကျန်တဲ့ခံတပ်ကို
အသိမ်းခံရမယ့်အရေးပါ။ နိုင်ငံအဝှမ်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရေးကိစ္စ၊ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးရဲ့ဘဝတွေနဲ့ သမိုင်းလမ်း
ကြောင်းကြီးတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားစေနိုင်တဲ့ ဒီလုပ်ရပ်ကို အလွယ်တကူအလျှော့ပေးလိုက်မလားဆိုတာ
ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုပြန်တော့ တရားတယ်ဆိုပြီးပြောနိုင်အောင် အခြေခံဥပဒေကောက်ရေး၊
စိတ်ကြိုက်ဥပဒေတွေထုတ်၊ နောက်ဆုံးတော့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ပါဖွဲ့ပြီး လုပ်နေကြပြန်ပါတယ်။
အနီးဆုံး ကရင်ပြည်နယ်ကိုကြည့်လိုက်ပါ။ အထင်ရှားဆုံးနမူနာတစ်ခုကိုကြည့်ရင် ရွေးကောက်ပွဲကော်
မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဟာ အရင်ကရင်ပြည်နယ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ ဦးစောအောင်ပွင့်ပါ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရပြောစရာမရှိ
ပေမယ့် တချိန်ကစစ်အာဏာရှင်စနစ်တဖြစ်လဲ မဆလလက်ထက်မှာ ကျိုးကျိုးနွံနွံနဲ့ကျရာတာဝန် ထမ်း
ဆောင်ခဲ့တဲ့ သူ့လိုလူတွေကိုစင်ပြန်တင်ထားတာထောက်ရင် အာဏာရှင်တွေဟာ လက်ညှိုးထောင်
ခေါင်းညိမ့်မယ့်သူမျိုးတွေကိုပြန်လှည့်သုံး၊ ဒီမိုကရေစီရယ်လို့ကြွေးကြော်ပြီး ဒီမိုကရေစီကို ကိုယ်တွေ့
မကြုံဖူး၊ မခံစားဖူးတဲ့ သူလိုကိုယ်လိုလူများကို ဒိုင်လူကြီးလုပ်ခိုင်း၊ စစ်ဗိုလ်တွေချည်းလိုလိုခေါင်းဆောင်
တဲ့ ကြံ့ဖွံ့လိုအဖွဲ့ကိုပါတီထောင် ဝင်ပြိုင်ခိုင်း၊ အတိုက်အခံယှဉ်ပြိုင်ဖို့ဆိုပြီး သစ္စာခံတိုင်းရင်းသား စစ်
ထွက်တွေကိုတွန်းထည့်နဲ့ စိတ်ကြိုက်လုပ်နေတာလည်း ထင်ရှားပါတယ်။ ဒါ့ပြင် ဒီမိုကရေစီစနစ်ခိုင်မြဲ
ပြီးဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေကနေ အကူအညီအကြံဥာဏ်မပြောနဲ့ လေ့လာသူတွေတောင်မပါတဲ့ ဒီရွေးကောက်
ပွဲကြီးကို ဘယ်လိုများဝေဖန်ရမလဲဆိုတာ စကားလုံးများလည်းမရှိတော့လောက်အောင်ပါပဲ။ အနီးစပ်ဆုံး
အနေနဲ့ကတော့ ယုံကြည်နိုင်လောက်စရာမရှိတဲ့ (ဆင်လုံး) မတရားရွေးကောက်ပွဲလို့သာ ခေါ်ဆိုလို့ရနိုင်
အချို့သူတွေကပြောလာပါမယ်၊ ကြောက်လို့မဲပေးရတယ်တဲ့။ ဒါကိုတွေးကြည့်ရအောင်။ မဲထည့်ထည့်
မထည့်ထည့် ရှိခဲ့ဖူးတဲ့သင်္ခန်းစာတွေအရ ကိုယ်ရည်ရွယ်တဲ့အတိုင်း၊ မဲထည့်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာဖို့ အာမခံ
ချက်မရှိတာ (တနည်းအားဖြင့် မဲလိမ်နိုင်တာ) က ပထမတစ်ချက်။ နောက်တစ်ချက်က မဲထည့်တာရဲ့
နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ဟာ ကိုယ့်ကိုအုပ်ချုပ်မယ့်အစိုးရကိုရွေးတာပါ။ ကိုယ်ရွေးရမယ့်သူတွေထဲမှာ ကြံ့ဖွံ့နဲ့
စစ်တပ်လူထွက်နိုင်ငံရေးသမားဆိုသူတွေအပြင် စစ်တပ်လုပ်သမျှကိုခေါင်းငုံ့ခံမယ့် (ခံရမယ့်) သူတွေကပဲ
တမိုးလုံးဖျောက်ဆိတ်ဆိုသလို နေရာတိုင်းမှာအများစုဖြစ်နေတာမို့ ဘယ်သူ့ကိုမဲသွားပေးမှာလဲ။ ရှေ့က
ပြောတဲ့သူတွေကို ရွေးမိတာဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးမယ့်သူတွေကို နောက်နာမည်တစ်မျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်
ဖို့ ကိုယ့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ပေးလိုက်သလိုသာ ဖြစ်သွားပါမယ်။ ဒီတော့ ကြောက်ရင်လည်းအရမ်းသာ
ကြောက်လိုက်ကြပါ၊ မဲသွားမထည့်ဖြစ်အောင်ကြောက်လိုက်ကြပါလို့ အကြံပေးလိုပါတယ်။
လူထုထဲမှာ အထူးသဖြင့်တိုင်းရင်းသားတွေဟာ နိုင်ငံရေးမှာမလည်ပတ်ဖူး၊ နားမလည်ဖူးလို့ အပြော
များကြပါတယ်။ ဟုတ်ကောင်းဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလူတွေအားလုံးကို နိုင်ငံရေးအသိတွေလက်
ဆင့်ကမ်းပြီး ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်တွေကိုထုတ်နှုတ်အသုံးချနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးတွေရအောင်လုပ်ပေး၊
ကျိုးစားပေးခဲ့ကြည့်ကြပြီးပြီလားလို့ မေးလိုပါတယ်။ လက်ရှိအာဏာရှင်တွေမလုပ်ချင်တဲ့ ဒီတာဝန်ဝတ္တရား
ဟာ အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်နွှဲလိုတယ်ဆိုတဲ့ပါတီတွေအပေါ်မှာ ကျရောက်တင်ရှိနေ
တယ်ဆိုတာကိုတော့ ပြောစရာတောင်လိုလိမ့်မယ်မထင်ပါဘူး။ အဆိုးအကောင်းနဲ့ သွေးချင်းသားရင်း
ပြည်သူတွေအပေါ် စိတ်စေတနာဘယ်သူကဘယ်လောက်ရှိခဲ့ကြတယ်ဆိုတာတွေကို သမိုင်းကသက်သေ
ထူပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့အားလုံး လူရယ်လို့ဖြစ်လာကြရာမှာ အဟိတ်တိရိစ္ဆာန်တွေထက်သာလွန်ဖို့ရာ
အတ္တကော ပရအတွက်ပါ ကျရာတာဝန်ဝတ္တရားကိုယ်စီကို ကျေပွန်စရာတော့ လိုကြပါလိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အနှစ်ချုပ်စရာအဖြေတစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲဟာ မြန်မာပြည်နိုင်ငံ
ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ အရာရာကိုအပြီးအပြတ်အဆုံးအဖြတ်ပေးမယ့် နောက်ဆုံးပွဲမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်လုပ်
စရာရှိတာလုပ်ကြပါ။ ဆွေးနွေးဖလှယ် ပြင်ဆင်ကြပါ။ ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်တာအောင်မြင်
လို့ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံတကာကအသိအမှတ်မပြုလို့ဖြစ်စေ၊ နအဖအလိုကျအဖြေထွက်မလာလို့ဖြစ်စေ၊ အပစ်
ရပ်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ တိုက်ခိုက်ကြလို့ဖြစ်စေ၊ ဒီတစ်ကြိမ်အရွေးခံရတယ်လို့ အသိအမှတ်ပြုပေးလိုက်
သူတွေရဲ့ သက်တမ်းပြည့်သွားလို့ဖြစ်စေ နောက်ထပ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကို မလွဲမသွေ
ကြုံတွေ့နေကြရအုံးမှာပါ။ အဲဒီအချိန်အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေအောင် ပြင်ဆင်ထားသင့်ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခြေအနေထပ်ပေးလာလို့မှ ထပ်ပြီးအဆင်သင့်မဖြစ်သေးပြန်ပါဘူးဆိုရင်တော့ ပြောစရာစကား
များများမရှိတော့ပါဘူး။ အားလုံးကြားဖူးထားတဲ့စကားလေးတစ်စုကိုပဲ အသုံးပြုလိုက်ပါရစေ။
၂၀၊ ၀၉၊ ၂၀၁၀
- ဒီစာစုဟာ စာဖတ်သူများအတွက် တွေးစရာတစွန်းတစအဖြစ် မတည်ဆွေးနွေးပေးတယ်လို့သာ
သဘောထားစေလိုပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံနေရတဲ့ဘဝမှာ ဥာဏ်နဲ့ယှဉ်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချ
လုပ်ကိုင်ဖို့ရာကတော့ စာဖတ်သူများရဲ့အပိုင်းဖြစ်တာမို့ ပြည့်စုံအောင်မြင်ပါစေလို့သာ ဆန္ဒပြု
- တနည်းအားဖြင့်ဆိုရရင် ဒီစာစုဟာ ပို့ချချက်မဟုတ်ပါဘူး၊ ဆွေးနွေးချက်တွေပါ။ ဒါကြောင့်လည်း
စိတ်ဆန္ဒရှိသူများကိုလည်း ပြန်လည်ဆွေးနွေးကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
Posted by မန်းကိုကို at 9/24/2010
★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ September 25, 2010 at 2:01 AM
မန်းကိုကို September 26, 2010 at 1:11 AM
ကျနော့်ဘလော့ကို လာလည်သူအားလုံးကို တန်းတူရည်တူပဲ သဘောထားပါတယ်။ ဘယ်သူမှတုံးတယ်လို့ မယူဆသလို ဘယ်လူမျိုးဘာသာကိုမှ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ ဒီဘလော့မှာတိုက်ခိုက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကုန်ကုန်ပြောရရင် အာဏာရှင်တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့နောက်လိုက်တွေကိုတောင်မှ ထောက်ပြရေးသားတာမျိုးကလွဲရင် ထိန်းသိမ်းသွားမှာပါ။ ကောင်း၊ မကောင်း၊ ချစ်ချစ် မုန်းမုန်း ရွေးချယ်လို့မဟုတ်ပဲ မြန်မာပြည်မှာမွေးဖွားခဲ့ကြသူချင်းအတူတူတော့ မုန်းတီးသတ်ဖြတ်ဖို့ထက် သက်သာပြေလျော့မယ့်လမ်းတွေကို ပိုတွေးရှာကြံပါမယ်။
ရှေ့မှာတုန်းက မြန်မာပြည်ဟာ နိုင်ငံရပ်ခြားနဲ့ ဆက်သွယ်ကူးလူးတွေ့ကြုံရတာ နည်းခဲ့လို့ ထပ်သိလာရသမျှ အနောက်ဖက်ကသူတွေကို ကုလားဆိုပြီးနာမည်တွေတပ်ရင်း အမျိုးပေါင်း ၄၀ ကျော်သွားခဲ့ပါတယ်။ အိန္ဒိယသားဆိုရင် အမျိုးပေါင်းကိုအများကြီးကွဲနေပါတယ်။ နောက်ဆုံး အသားလတ်တဲ့ မီဇိုလူမျိုး(ချင်း) တွေတောင် ပါလိုက်ပါသေးတယ်။ အာရပ်လို့ဆိုရင်လည်း သူတို့ရဲ့ မျိုးနွယ်စုသီးခြားစီနဲ့ ရပ်တည်နေတာကို ဂုဏ်ယူကြတာ တွေ့နိုင်ပါမယ်။ ဥရောပသား မျက်နှာဖြူတွေမှာလည်း အားလုံးကို အင်္ဂလိပ်ဆိုပြီးသွားလုပ်လို့ မရပါဘူး။
အချုပ်ပြောရရင်တော့ ပို့စ်နဲ့ဆိုင်တာမဆိုင်တာ အပထား၊ အမြင်မတူသူတွေရဲ့ သဘောထားတွေကို အလေးထားတဲ့အနေနဲ့ မှတ်ချက်ကိုတင်ထားပါတယ်။ တစ်ခုရှိတာကတော့ အလည်လာရောက်ဖတ်ရှုသူ အများစုနဲ့မသင့်တော်တာတွေပါလာရင်တော့ ဦးစားပေးရမဲ့အရာတွေကို ချိန်ဆဆုံးဖြတ်သွားဖို့ရှိတယ် ဆိုတာကိုတော့ အသိပေးထားလိုပါတယ်။
tint September 26, 2010 at 9:02 AM
အွန်လိုင်းနယ်ထဲ ခြေမဆန့် ဖြစ်ခဲ့တဲ့၎လလောက်အတွင်းကိုမန်းလဲခေတ်မီနေပြီဘဲ ၊ ကျည်ကွယ်မျက်ကွယ်ဆြိုပြီး တနေရာက လူ၂ယောက်ကို ဒီဘက်သိုက်ပြောင်းဘို့ခေါ်မိတာ ခုတော့ဒိဘက်လဲဆူဆူဆူဆူပါဘဲလား http://simpleviewsonmyland.blogspot.com/2010/09/blog-post_22.html#comments
★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ September 26, 2010 at 9:34 AM
ဒီခေတ်မှာ အားလုံးက စကားလုံးတွေ လှလှပပပြောပြီး လိမ်ညာကောက်ကျစ်နေတာချည်းပဲ။ ဒီတော့ ခင်ဗျား ကျုပ်က ရိုရိုသေသေပြောမနေနဲ့။ အခြောက်သံနဲ့လဲ မပြောနဲ့။ စိတ်ထဲရှိတာ ဖြောင့်ဖြောင့်ပဲပြောစမ်းပါ။ ကုလားကို ကြောက်ရင် ကြောက်တယ်ပေါ့။ ကုလားတွေ ဆိုးသွမ်းတော့ ဘာမှ အသံထွက်ရဲဘူး။ ကုလားကို လုပ်တဲ့အချိန်ကျရင် သူတော်ကောင်းလိုလို.. ဘာလိုလို အထာနဲ့ သြ၀ါဒပေးကြတယ်။ အဲဒါမင်းတို့က ဘာသဘောလဲ? နာမည်ကောင်းရမလားဆိုပြီးလုပ်တာလား?
တော်တဲ့သူကို လူတော်လို့ ခေါ်ခွင့်ရှိသလို တုံးတဲ့သူကိုလည်း ငတုံးလို့ခေါ်ခွင့်ရှိတာပေါ့။ (ဆဲတာမှ မဟုတ်တာ။) မင်းတို့မှာ စဉ်းစားဥာဏ်မရှိဘူးဆိုတာ သိနေလို့.. ဒီမိုငတုံးလို့ခေါ်တာပဲ။ မင်းတို့ တွေပြောတဲ့စကားတိုင်းဟာ မီဒီယာတွေ နဲ့ စာအုပ်တွေက စကားတွေကို ကြက်တူရွေးလို ရွတ်ပြတဲ့ အဆင့်ပဲရှိတာ။ အဲဒါကို ငါက ငတုံးလို့ခေါ်တာ မှားလို့လား? အမှန်ကိုပြောလို့ ဘလော့လာဖတ်တဲ့သူမရှိမှာကို စိုးရိမ်တယ်ဆို ဒီကော်မန့်ကို မတင်နဲ့ပေါ့။
ကြက်တူရွေးလို မီဒီယာမှ စကားလုံးတွေကို လိုက်ရွတ်ပြနေသူများကို ဆန့်ကျင်သည့်
မန်းကိုကို September 26, 2010 at 11:34 AM
၄ လလောက်က ဘာတွေလုပ်နေတာတုံး၊ တရားစခန်းဝင်တာလား၊ တောထွက်တာလား၊ မြန်မာပြည်ပြန်ပြီး ကဠုန်ဆားချက်နေတာလားဗျ။
ဆရာလုပ်လိုက်တာ “ခုတ်ရာကတခြား ရှရာကအဖျား” ဆိုလား ဖြစ်သွားတယ်ထင်ပါရဲ့ :-)
ကျနော်ကတော့ ခေတ်မမှီ(မတိုးတက်)လှပါဘူး၊ သိမှတ်မိတာလေးထဲကအချို့ကို တစ်ချက် နှစ်ချက်လောက် စကားပြေရေးဆွေးနွေးကြည့်တာပါဗျာ။
အောက်မှာတော့ ဆရာပေးတဲ့လင့်မှာ ကွန်မန့်ပေးခဲ့တာကို ကူးပြီးထည့်ထားလိုက်ပါတယ်။
“ကိုမန်းဘလော့ကို သိုက်ပြောင်းကြရအောင်” တဲ့လား ဆရာရယ်၊ လုပ်ရက်တယ် :-)
ကျနော့်ကို ဘာစီရင်ချက်များချမလည်းဆိုတာလည်း အမိန့်ရှိပါအုံး၊ သမိုင်းလား၊ သိုက်လား။
သမိုင်းက ကိုယ့်ကရင့်သမိုင်းတောင် မနည်းရှာစုနေရတာခင်ဗျ၊ တစ်ပြည်လုံးကျတော့ ဆင်ခေါင်းကို ပုရွက်ဆိတ်မချီပါရစေနဲ့ဗျာ။ ဆက်စပ်မှုနဲ့ ထင်မြင်ချက်ကလေးလောက်ဆိုရင်တော့ သေဖေါ်ပါပါ့မယ်။
သိုက်ကိစ္စကတော့ အင်မတန်ဝေးပါတယ် ဆရာရယ်။ တစ်ခုပဲကြားဖူးတာက ဂျပန်ခေတ်ကမြှုပ်ထားခဲ့တာတွေ (သိုက်လို့ဆိုကြပါစို့) ကို တောင်ငူမြို့ကျုံးထဲမှာ ရှာဖွေတူးယူဖို့လူတစ်ဦး ကျိုးစားခဲ့ဖူးတယ်လို့သိရပါတယ်။ တူးသူက ဘားအံမြို့ကမ်းနားလမ်းမှာနေသူဖြစ်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်ဆီကခွင့်ပြုချက်တောင် ယူထားခဲ့(နိုင်ငံတော်ပြန်တမ်းတွေဘာတွေနဲ့ ပြန်ပြီးတူးခဲ့) တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲဒီလူကြီးအကြောင်းကြားမိထားပြီး ကိုယ်တိုင်တွေ့၊ အတည်ပြုချက်ယူခဲ့သူ ရင်းနှီးတဲ့အငြိမ်းစားဗိုလ်ကြီးတစ်ဦးက ပြောပြလို့သိခဲ့ရတာပါ။
အပိုအနေနဲ့ကတော့ အဲဒီသိုက်ကိုတူးလို့ရကာနီးတစ်ရက်မှာ သိုက်စောင့်အမျိုးသမီးတွေ (ဂျပန်တွေသတ်ခဲ့တဲ့ အထမ်းသမားတွေ) က လာတွေ့ပြီးဆက်မတူးဖို့ ပြောတယ်ဆိုပဲ။ ဒါပေမယ့် နောက်တစ်နေ့မှာ ရှိသင့်တဲ့နေရာမှာ ဘာမှမရှိပဲ သိုက်ကွယ်သွားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ (ယုံလိုသူတွေအတွက်ပါ။)
tint September 26, 2010 at 3:29 PM
ပွဲဆူနေတဲ့အောက်မှာ ကျွန်တော်တို့ က အဟောင်းအဆွေးတြွေေုပာနေတယ်ဆို တူတူခံကြတာပေါ့ ။
၄လကတော့ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ဘော်ချက်နေတာပါဗျာ ။
ခု ၂ပါတ်လောက်တော့ နားမယ်စိတ်ကူးတာဘဲ ( စိတ်ကူးတာပါ။ကိစ္စများရာလူတို့ ဘောင်မှာ တကယ်နားဖြစ်မဖြစ်တော့ ငွေရောင်ပိတ်ကားပေါ့ဗျာ )
သိုက် သိုက် သမိုင်း
အင်း လူသားအတွက် စတဲ့အစက ၂ခုကိုး
လောလောဆယ်ကိုမန်းက တည်ပေးတောယ့ သိုက်တိုလီမိုလီဆက်ကြကောင်းမလားဘဲ ။
တော်တော်တော့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ယုံကြည်မှုအစဉ်အလာတရပ်ဘဲ ။
ဒါက ဗမာပြည်တခုထဲရှိတယ်ထင်တယ်။ ( အိန္ဒိယမှာအဲလိုဆင်ဆင်ရှိနိုင်မလား?? )ဗမာဆို တမင်သုံးတာပါ.။
သိုက်ဆန်ဆန်ပါးစပ်ရာဇ၀င်ကို မှတ်တမ်းအနေနဲ့ခေတ်အစောဆုံးရေးတာကိုတွေ့ ဘူးတာက စစ်ကိုင်းဦိးုဘိုးသင်းဘဲ ။ သူ့ အဆိုက ပန်းတောင်းသက်သာတဲ့။ မင်းတုန်းနားမှာ ရှိခဲ့ တဲ့ ပုဂံမတိုင်ခင်ခေတ် မြို့ ဟောင်းတွေမှာ အဲမျိုးဆန်ဆန်ရှိခဲ့ ဆိုကိုး ။
မန်းကိုကို September 26, 2010 at 6:32 PM
အဖေါ်မက်လို့ ဘော်မချက်ရင် ရေရှည်မှာအတော်ခက်အုံးမှာဗျနော၊ နောင်မှအပြစ်တင်ခံရမယ့်သူ ကျနော်တော့မဖြစ်ပါရစေနဲ့။
ဆရာပြောတဲ့သိုက်ကိစ္စက မြန်မာပြည်တစ်ပြည်ထဲတော့ မဖြစ်နိုင်ရေးချမဖြစ်ပါဗျာ၊ အခြားဟာတွေလည်း အားလုံးလိုလို ကူးချထားတာပဲဟာ (ဘေးဘီလေး နည်းနည်းကြည့်အုံးမှ) အဟီး။
ရုပ်ရှင်တွေထဲတော့ အိန္ဒိယ၊ ဟောင်ကောင်(တရုတ်)၊ ယိုးဒယား ကြည့်မကုန် ရှုမခန်းပါ။ အထူးသဖြင့် ကြာကြာနေဖူးတဲ့ယိုးဒယားမှာ ရှမ်းတွေနတ်၊ သရဲ၊ သဘာဝလွန်တွေကိုယုံကြည်ပုံများ သြချရလောက်တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၈-၉ နှစ်ဝန်းကျင်တုန်းကတောင် ဝန်ကြီချုပ်တပ်ခ်ဆင်ကိုယ်တိုင် ဂျပန်တွေဝှက်ခဲ့တဲ့ ရတနာသိုက်တွေ့ပါတယ်ဆိုပြီး ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ကိုယ်တိုင်သွား၊ ဒေါ်လာ တစ်သန်းတန်စက္ကူတွေနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံတော့ပွပြီဆိုတာမျိုးပြောတာ သတင်းထဲတောင်ပါတယ်ဆိုပဲ။
“သိုက်ဇာတ်တွေဟာ တိုက်ပစ်ကယ်စတိုရီလိုင်းရှိတယ်” ဆိုတော့က လွန်ခဲ့တဲ့လပိုင်းကပဲ fairy tale ရေးရဖို့ အကြောင်းဖန်လာတော့ တစ်ပုဒ်ရေးလိုက်ရသေးတယ်ဗျ။ ကလေးကျောင်းသွားတက်မိမှတော့ ကယားငွေတောင်ဇာတ်လမ်းကို အထွန့်တက်ပြင်ပြီးရေးလိုက်ရတော့တယ်။ ဆရာပြောသလိုပဲ genre လား typical storyline လားပဲ သူ့ form / formulaကရှိထားပြီးသားဆိုတော့ ဘောင်ဝင်အောင်ရေးပေးလိုက်တာ အဆင်ပြေသွားတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာနေရင် အင်္ဂလိပ်လိုပုံပြင်တစ်ပုဒ်တောင် ဆုံးအောင်ဖတ်ဖူးတာမဟုတ်ဖူး။
မြန်မာပြည်မှာ ဖတ်ဖူးတာကတော့ လှိုင်ထိပ်ခေါင်တင်ကို သိုက်စောင့်သူ့သူငယ်ချင်း သိုက်အပြောင်းမှာ နောက်ဆုံးကပါတဲ့ ရွှေလိပ်တွေကို အရိုက်ခိုင်းရာက နောက်ဆုံးအသေးဆုံးရွှေလိပ်ကလေးကိုပဲ ရိုက်လိုက်မိပြီး ရခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဘုရင်ခေတ်မှာ ရှိခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေကတော့ အတည်ယူရလည်း ခပ်ခက်ခက်ပါပဲ။ ဥပမာ ဘုရင်မွေးချိန်မှာ တော်လဲသံ၊ မိုးခြိမ်းသံ၊ မြေငလျင်လှုပ်၊ ကျီးနား ပြီးတော့ဘာတွေမြေခတယ်ဆိုလား စုံလို့ဗျာ၊ ဒီကြားထဲ အချင်းစလွယ်သိုင်းကလာသေးတယ်၊ မသေလို့ကံကောင်း။
အီဂျစ်က မံမီနဲ့ သချို င်္င်းဖောက်သူတွေလည်း သိုက်တူးသူတွေပါပဲ။ ဆက်စပ်ပြီးသတိရတာက ၂၀ ရာစုအစမှာ တူရကီမှာ Troy မြို့ဟောင်းလို့ထင်ရတဲ့နေရာကို တူးဖေါ်ဖို့ကျိုးစားခဲ့တဲ့သူ တစ်ယောက်အကြောင်းပါ။ စက်ကရိယာနဲ့ စစ်ဆေးတဲ့နည်းပညာတွေ ကောင်းကောင်းမပေါ်သေးတဲ့ခေတ်မို့လို့ မြို့ဟောင်းနေရာဖြစ်နေတဲ့ တောင်ကုန်းတစ်ကုန်းကိုတူးထုတ်ရာမှာ အချိန်လွန်မှ မြို့ရိုးဟောင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ရိုးရိုးကျောက်တုံးတွေလို့ထင်ပြီး တူးထုတ်မိတာကို သိလိုက်ရလို့ အတော်ပျက်စီးသွားတာကို မှတ်သားရဖူးပါတယ်။
ဒါနဲ့ ပွဲစည်သွားအောင် ဆရာဝတုတ်ကိုပါ ဖိတ်ပြီးဖြစ်ဖြစ်၊ သူ့ဆီသွားပြီးဖြစ်ဖြစ် ပြောကြရင်မကောင်းဖူးလားဗျ။
tint September 26, 2010 at 7:53 PM
ကိုဝတုတ်ဖိတ်တာတော့ ကောင်းပါရဲ့။
ခုပြောမဲ့ ထဲ ဘာသာရေးပါရောညှပ်ပါလာရင် ဦးဥက္ကဋ္ဌတို ဦးအာဒိစ္စခေါ် ဦးအောင်မြတ်ထွတ်တို့ပြန်ဖေါ်လာရင်တော့ ကျွန်တော်ကြောက်တတ်တယ်နော် ။ အဲဒါမပါကြးဆိုရင်တော့ ရပါ့ဗျာ ။
( ဟိုနေ့ က Enter the dragon ထိုင်ကြည့်တော့ ကာရိုက်တာတယောက်ပြောသလိုလေ ။ There isaline I will not cross ဆိုတာလေး :P )
သိုက်ရဲ့ဇာတ်လမ်းကြောရိုးက တူတူဘဲဗျ။
သိုက်စောင့်ချောချောလေး ( ကျား/မ)ပါမယ်။ အနားက ရွာထဲက ချောချောတယေက်နဲ့ ကြိုက်မယ်။
သိုက်စာရထားတဲ့သိုက်ဆရာပါမယ်။
ခုနသိုက်က ပါတ်စ်ပို့ တ်နဲ့ လာသူကို ချုပ်နောင်နှိပ်စက်မယ်။ အဲမှာ အပူတိုက်ထည့်မယ် ။ သိုက်ကလာတဲ့သူကလဲငို ၊ တသိုက်လုံကလဲငို၊ခုနသိုက်စောင့်ရီးစားကလဲငို ၊ နောက်ဆုံး သိုက်စောင့်ကနိုင်လို့သိုက်ပြောင်း၊သိုက်ဆရာပြေး၊ လူက အလှူလုပ်အမျှဝေ။
အဲဖေါ်မြူလာက ပုံသေဘဲ ။ ကိုက်လဲကိုက်တယ် ။
သိုက်ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ပစ္စည်းစုကိုတူးတာနဲ့ ကို ၂ပိုင်းခွဲရမယ်ထင်တယ် ။
မြန်မာစကားသိုက်ဆိုတာက ပရလောကသား ( အသူရကယ်အနွယ်တွေ) စောင့်တဲ့ပစ္စည်းစုမှ သိုက်ခေါ်သလားလို့ 
ရှေးဟောင်းပစ္စည်းရှာတဲ့ သူတွေကို သိုက်စာရင်းထဲထည့်မလား ??
ခုကိုမန်းတင်လိုက်တဲ့ ပါးစပ်ရာဇ၀င်အတည်ယူမရဆိုတဲ့စကားလေးဟာ သိပ်ဆွေးနွေးဘို ကေ့ာင်းတာပေါ့
ခုန Troy ဆိုတာလဲ ပါးစပ်ရာဇ၀င်ကို Homer ပြန်ရေးတာကို ဖတ်မိတဲ့Schliemann ကသွားတူးခဲ့တာမဟုတ်လား ။
တခုရှိတာက သိပ်လှတဲ့ဟယ်လင်တို့ခြေဖနောင့်ကလွဲပြီးတဲ့အာခိလိတို့သြဒိစီးယပ်တို့ တကယ်ရှိမရှိတော့ ခုထိ မသေချာကြသေးပါ။
ဒီတော့ အခြေခံငြင်းမရတဲ့ အချက်နဲ့အတည်မပြုနိုင်တဲ့ အချက်တွေကို သတိနဲ့ခွရြတာ ပျော်စရာအလုပ်ပါဘဲ ။
ခုန ကိုမန်းပြောတဲ့အချင်းစလွယ်သိုင်းဆိုတာလိုပေါ့ စကြာမင်းခေါ်တြ့ မောင်ဖေခင်ရှိခဲ့တာအမှန် ။ အချင်းစလွယ်ဆိုတာကျတော့ ပြဿနာက စကားလုံးဘဲ
umbilical cord လား ၊ Placenta ကိုပြောချင်တာလား ၊ amniotic membrane remnant လား ။ ဘာပြောလဲမသိတော့ အဖြေရှာရခက်နေတာကိုး ။ umbilical cord ကို ချက်ကြိုးလို့ မြန်မာလိုခေါ်ပေမဲ့placenta and amniotic membrane remnant ကျတော့ ဗမာက အချင်းဘဲလုံးချတော့တာဘဲ ။
ခုကျတော့ ခွကျတော့တာဘဲ ။
စကြာနဲ့ ဘိုးဘိုးအောင် ဇာတ်ဟာ facts and fiction ရောနေတဲ့ အကောင်းဆုံးဥပမာတခုပါဗျာ
သူရိန် September 26, 2010 at 9:00 PM
ဆရာတင့် ခေါ်လို့ ဒီဘက်လိုက်လာတာဗျ။ ကိုမန်း ဆောင်းပါးကို သျှမ်းသံတော်ဆင့်မှာ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ ဘလော့ကိုတော့ ခုမှရောက်ဖူးတာ တောင်းပန်ရတော့မှာပဲ။
သိုက်အကြောင်းတော့ ကျွန်တော် သိပ်နားမလည်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် စိတ်ဝင်စားတယ်။ ဆရာတင့် ပြောတဲ့ ပါးစပ်ရာဇဝင်တွေကို အတည်ယူမရသလို လစ်လျူပြု၍ မရကြောင်းဆိုတာကို ထောက်ခံပါတယ်။
မန်းကိုကို September 26, 2010 at 10:05 PM
ဆရာတင့်ရေ အချိန်မရှိသေးလို့ အပြန်အလှန် အချွန်လေးနဲ့“မ”လိုက်ပါရစေအုံး။ http://drlunswe.blogspot.com/2010/09/blog-post_8819.html ဆရာအပျင်းပြေသွားမှာပါ။
tint September 26, 2010 at 10:22 PM
မိုးကြိုးပစ် တန်းလက်ကာဗျာ ။
ခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေက ငြင်းနေခုန်နေရင်း ပြီးသွားကောင်းသားဗျ။
၁၉၄၈လွတ်လပ်ရေးရဲ့နီးသောအကြောင်းကို ကြည့်ရင် ၄၂ဘီအိုင်အေနဲ့၄၄ဖတပလ(ဖဆပလ)ဗျနော် ။ အဲဒါကိုငြင်းမဲ့ လူတော့ ရှိမထင်ဘူး
ခုနေက နောက် ၄၈ဖြစ်ဘို့ ရာ အဲဒီနီးသောအကြောင်းတွေတခုမှမရှိဘူးလေဗျာ။
၁၈၈၅မှုာ တက်လာတဲ့ဗြိတိသျှတပ်တွေကို ခံချရာကနေ ဟိုက ဘင်္ဂလားက Governor's commissioned officers တွေပါတဲ့အိန္ဒိယတပ်တွေနဲ့ မလောက်လို့Queen's commissioned officersတွေပါတဲ့royal liverpool regiment, Queen's Irish regimentတွေပါ ဗမာစစ်မျက်နှာပို့ ပြီး နှိမ်တာမှာ စူမရအောင်ကိုပျက်ခဲ့တယ်နော် ။
အဲကနေ ၁) ၁၉၂၀နေရှင်နယ်ကျောင်းများ
၂)၁၉၁၁လောက်ကစလာတဲ့nutritious journalism
၃)၁၉၁၁လောက်ကဘဲ ၀ိုင်အမ်ဘီအေကစတဲ့လူငယ်ပညာပေးလုပ်ငန်းများ ( နောက် လူငယ်များကြီးပွားရေးအသင်း၊ကာယဗလဦးရှိန်နဲ့ ခြေလျင်ဦးအုန်းခင်လှုပ်ရှားမှုတွေ၊စာဖတ်သင်းတွေ )
၄)၀ံသာနုကစလို့အမျိုးသားရေးဆောင်သော နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများ ဒို့ ဗမာအစည်းအရုံးထိဆိုပါတော့လေ
အဲလို ဝေးသောအကြောင်းတွေ ရှိခဲ့တယ် ။
ခုနေ ပြန်စစ်တော့အဲဝေးသောအကြောင်းတွေလဲတချက်မှ မြေပေါ်မရှိပါ။
အဲတော့ အဲဒါတွေမရှိဘဲ ၄၈လုပ်ပါဆိုတော့
သမိုင်းတော့ အူပေါက်င်္ပြိထင်ပ ။ :P
tint September 26, 2010 at 10:45 PM
၅)Prof .Luce . JS Fernival ဦးဖေမောင်တင်တို့ က စခဲ့တဲ့ ဥရောပပညာလဲရ၊မြန်မာစရိုက်လဲမပျောက်တဲ့ ပညာတတ်အစိုးရ၀န်ထမ်းများ
မန်းကိုကို September 27, 2010 at 12:25 AM
ကိုသူရိန် ရောက်လာတာဝမ်းသာပါတယ်။ တောင်းပန်စရာတော့မလိုပါဘူးဗျာ။ လူမသိသူမသိ၊ ဘဝအတွေ့အကြုံလေးအနည်းအကျဉ်းကိုမှီပြီး တောင်ရေးမြောက်ခြစ်နဲ့လုပ်နေတဲ့လူ၊ ဘယ်သူကအလွယ်တကူသိနိုင်မှာမို့တုန်း။ ဒါနဲ့ ကိုသူရိန်ရဲ့နာမည်ကတော့ ပအိုးဝ်ဆန်တယ်နော။
umbilical cord ကို ချက်ကြိုး၊ placenta and amniotic membrane remnant တို့ကတော့ အချင်းနဲ့ အပိုထွက်အသားစလိုဟာတွေ ထင်မိတာပါပဲ။ ဆရာဝန် ပညာပြတော့လည်း ခံရပြန်ပြီဗျ။ အမှန်ပြောရရင် ချက်ကြိုးနဲ့ အချင်းကို တပေါင်းတည်းလို့ထင်မိတာတစ်ကြောင်း၊ ချက်ကြိုး(သို့မဟုတ် အချင်း) ရှုပ်ရင် ကလေးမှာ အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ နားလည်ထားမိတာလည်း ပါပါတယ်။
ဘာသာရေးကတော့ ကျနော်ဘာမှနီးပါး မသိနားမလည်သလို မပါရေးချမပါပါ၊ ဒါပေသိ စူပါဆရာတင့်တစ်ယောက် ကျွဲပါးစောင်းသွားတီးခဲ့တာတွေလည်း ဖတ်ရပါတယ်ခင်ဗျ။ ဆရာရှင်းပြသလောက် မလိုက်နိုင်သူတွေကို ဆရာကထပ်ထပ်ပြီး ကျိုးစားရှင်းတာကိုလည်း အသာပြုံးဖတ်ပြီး တိတ်တိတ်ကလေး ပြန်ပြန်လာပါတယ်ခင်ဗျ။
သိုက်ကိစ္စကတော့ ရေးစရာနည်းနေလို့ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်သိုက်၊ ရတနာသိုက်နဲ့ ပရလောကသိုက်တွေကို ခပ်တည်တည်နဲ့ ရောမွှေလိုက်တာပါဗျာ၊ ဆရာက Schliemann ကိုသိပြီးသားဆိုတော့ ဆက်ရွှီးရခပ်ခက်ခက်။ ဒီလူက တန်ချိန်ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ကျောက်၊ မြေတွေကို တူးဖယ်ခဲ့တာတော့ လက်ဖျားခါတယ်ဗျာ၊ အချိန်နဲ့ ငွေကုန်အတော်ခံခဲ့သူပဲ။ ဒီလိုတူးဆွသူတွေထဲမှာ အကြီးကျယ်ဆုံးလို့များ ခေါ်လို့တောင် ရမလားပဲ။ ဟယ်လင်၊ အာခီးလိစ်တို့ကတော့ တကယ်ရှိခဲ့ပုံရပါတယ်။ နတ်ဘုရားတွေကတော့ ဘိုးဘိုးအောင်နဲ့ နီးစပ်ပါလိမ့်မယ်။ documentary တစ်ခုထဲကြည့်ရတာတော့ ဒီစစ်ပွဲဖြစ်ရခြင်းဟာ စီးပွားရေးနဲ့ သူတို့မဟာမိတ်တွေရဲ့ဖိအားက အဓိကလို့အဆိုပြုပါတယ်။ အလယ်ခေတ်အလွန်မှာ မူဟာမေဒင်(မွတ်ဆလင်) တွေကိုကျော်ပြီး စီးပွားကွက်တွေ သဘောင်္နဲ့လိုက်ရှာကြတဲ့ ဒတ်ခ်ျနဲ့ စပိန်တွေကို သွားယှဉ်ပြီးသတိရမိတယ်။ စီးပွားရေး အရေးပါပုံများပြောပါတယ်။
ဆရာ ထန်းလက်နဲ့ကာတဲ့ဟာကိုတော့ ပြောရအုံးမယ်။
ဆရာပြောတာတွေက တော်တော်မှန်ပါတယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း အသိပညာဖြန့်ဝေရေးဖက်မှာ စိတ်အားသန်သူပါ။ ဒါပေမယ့် အခြေအနေကတော့ မတူတော့ဖူးလို့ထင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ၈၈ ပြီးစနှစ်ပိုင်းမှာ (၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုကြပါစို့) ပြည်သူတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်မာန်အဟုန်ဟာ အကင်းမသေသေးလို့ ဒီလှိုင်းကိုသာ အလိုက်သင့်စီးနိုင်ခဲ့ရင် ပွဲသိမ်းနိုင်ချေတစ်ခုပါ။ ဒီဖက်ကျတော့လည်း အနည်းဆုံးတော့ ခံရတဲ့နင်းပြားလူထု (၅၀%နဲ့အထက်) ဟာ ကယ်တင်ရှင် (သို့မဟုတ်) ဦးဆောင်သူတွေကို စောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတာပါ။ ပြတ်သား၊ စနစ်ကျ၊ အမြှော်အမြင်ရှိရှိ၊ နိုင်ငံရေးသမားပီပီလုပ်ကိုင်နိုင်ရင် အခွင့်အရေးတချို့ ထပ်ဝင်လာခဲ့သေးပါတယ်။ မသိတာလား၊ မလုပ်ချင်တာလားပဲ လက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့ ခုအချိန်အထိ ရောက်လာခဲ့တာပါ။
ဆိုလိုတာက အဲဒီလွတ်သွားတဲ့အခွင့်အရေးမျိုးတွေကို ရလာရင်ယူဖို့၊ မရှိရင်လည်း ဖြစ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတွေကို အဆုံးစွန်အထိကျိုးစားဖို့ အက်ဆစ်ဆိုသူက ထောက်ပြသတိပေးတာလို့ ထင်ပါတယ်။ မလုပ်လို့မဖြစ်ခဲ့တာကို ရောင့်ရဲ့မယ့်အစား၊ လုပ်ခဲ့ပြီးပြီ မရဖူးဆိုတာမျိုးဆိုရင်တော့ ဖြေသာလိမ့်မယ်လို့လည်း ပြောချင်တယ်လို့ နားလည်မိပါတယ်။
၄၈ အနေထားနဲ့က ခေတ်လည်းမတူတော့တာ ထည့်တွက်ရပါမယ်။ ၉၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင် နယ်လ်ဆင်မင်ဒဲလားတို့ခေတ်နဲ့တောင် တူတယ်လို့ပြောရခက်တဲ့ အချိန်အပိုင်းအခြားကို ကျနော်တို့ရောက်နေကြတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ တစ်ခုပဲစိုးရိမ်စရာကတော့ ကျိုးပဲ့ပျက်စီးပြီးမှ ပြောင်းလဲသွားမှာမျိုးကိုပါ။ ဒါကိုပဲ ဖားကလေးအချို့က စနစ်ပြောင်းလို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်အဖြစ် အဓိကထား ဆုပ်ကိုင်ထားတာမျိုးကျတော့ ကျိုးကြောင်းမကျပြန်ဖူး။
အေးဗျာ၊ ပြောရင်းနဲ့ ကိုးကား၊ အချက်လက်တွေလျော့ပြီး အမြင်တွေချည်း ခြုံငုံရှေ့တန်းတင်သလို ဖြစ်နေတော့မယ်။ လောလောဆယ် ဒီလောက်နဲ့ တော်ထားပါအုံးမယ်။
သူရိန် September 27, 2010 at 3:15 AM
ဉာဏ်မမှီလှတဲ့ အကြောင်းတွေမို့ ကျွန်တော့်ဉာဏ်လေးနဲ့ ဘာမှတော့ ဝင်မပြောလိုပါဘူး။ ၄၈ လိုမဖြစ်နိုင်တာကတော့ အမှန်ပဲ၊ ၄၆၊ ၄၇ လောက်က ဖဆပလလို ပြည်သူတရပ်လုံး နီးပါးကို အမိန့်ပေးနိုင်တဲ့ အနေအထား ရှိသလား၊ ပြည်သူ့ရဲဘော်လို အမာခံ တပ်ဖွဲ့ဝင် အင်အား ရှိသလား။ ဆိုတော့ ဖြစ်ချင်တာတွေ အလှမ်းဝေး နေဦးမှာပါပဲ။ တခုရှိတာက အာဏာရှင်စနစ်ကတော့ ကမ္ဘာမှာ ကျဆုံးသွားပါပီ။ ဒီပုံစံ အတိုင်းဆက်အုပ်ချုပ် နေလို့ မဖြစ်တော့ တာကတော့ အမှန်ပဲ။ ဘယ်ပုံစံနဲ့ ပြောင်းမယ် ဆိုတာ မသိနိုင်ပေမယ့် အပြောင်းအလဲ တစ်ခုကတော့ ဖြစ်ရတော့မှာပဲ၊ သွေးထွက်သံယိုတွေ မဖြစ်ရရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာ နော။
ဒါနဲ့ စကားမစပ် ကိုမန်းရေ၊ ကျွန်တော်သိမှီသလောက်တော့ ကျွန်တော့်မျိုးရိုးထဲ ပအိုဝ်း မပါဘူးဗျ၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဘက်က မွန်-ဗမာ အဆက်တွေပါ။ ဦးကြီး လုပ်သူက ကရင်နဲ့ရတော့ ကရင်အမျိုးတွေတော့ အများကြီးပဲဗျို့။ တကယ်တော့ တမြေတည်း နေမှတော့ အားလုံး ဆိုးတူ ကောင်းတူ အမျိုးတွေပဲပေါ့ဗျာ ဟုတ်ဘူးလား။
မန်းကိုကို September 27, 2010 at 3:42 PM
ကိုသူရိန်ရေ၊ ဥာဏ်မမီဖူးလို့တော့ မနှိမ့်ချလိုက်ပါနဲ့အုံး၊ နေရာအတော်များများမှာ အသိအတတ်ပညာနဲ့ ပြောင်းလဲမှုကြီးတွေရဲ့ အကြောင်းရင်းတွေဟာ လွယ်လွယ်ကူကူ လက်တစ်လုံးအကွာလေးမှာ ရှိနေတတ်ကြပါတယ်။ အခွင့်မကြုံလို့သာ အခွင့်မရလိုက်တာ၊ မရသေးတာလို့ ယူဆလို့ရနိုင်ပါတယ်။
၄၈ နဲ့သဘောသဘာဝမတူဖူးလို့ အပေါ်ကပြောတာက အကြောင်းရှိပါတယ်။ ဒေါ်စုရဲ့အရှိန်အဝါက မသေးလှပါဘူး။ ပြောရရင်တော့ အရှည်ချဲ့ရမှာမို့ ပို့စ်တစ်ပုဒ်ရေးကြည့်အုံးမယ် စိတ်ကူးပါတယ်။ မိကျောင်းမင်းရေကင်းပြရမလို အကွက်ဖြစ်နေလို့လည်း ခက်တော့ခက်ပါတယ်။ တစ်ဖက်ကလည်း ဘဝမှာတာဝန်ကျေအောင် လုပ်စရာကိုတော့ လုပ်လိုက်ရမှလို့ သဘောထားလို့ လုပ်မှာပါပဲ။ ဒီလိုပြောတာကလည်း စောင့်ကြည့်လေ့လာသူအချို့နဲ့ သက်ရှိသမိုင်းတွေရဲ့ မျှဝေမှုတွေကြောင့်လည်း ပါတယ်လို့ ပြောရမှာပေါ့။
ကိုသူရိန်ပြောတဲ့ ဆိုးတူကောင်းတူအမျိုးတွေလို့ လူအများစုကနေ သဘောထားနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာ။ အဲဒီလမ်းဆီကိုပဲ ကျနော်လည်း လျှောက်နေတာပါ။ အကောင်အထည်ပေါ်ဖို့က ကြာတော့ကြာပါအုံးမယ်။
ဒေါင်းမင်း September 27, 2010 at 4:24 PM
မန်းကိုကို September 27, 2010 at 5:48 PM
လာလည်တာ ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာ၊ မြှောက်တာတစ်ခုပဲ နည်းနည်းဆိုးပါတယ်။
သိုက်ကို ကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့သူဆိုရင်တော့ ပို့စ်ဖြစ်ဖြစ်ရေးပြီး ပြောပြပါလားခင်ဗျ၊ အားလုံးလည်း ဗဟုသုတရတာပေါ့။ တစ်ဖက်မှာလည်း ကိုဒေါင်းမင်းတစ်ယောက် အစိုးရရဲ့ ဆုငွေတွေရခဲ့ပြီး အခုလိုထိုင်းနိုင်ငံရောက်၊ အင်တာနက်ပေါ် တက်လာနိုင်လောက်အောင် အသင့်အတင့် ချမ်းသာသွားတယ်လို့ ယူဆရတော့မှာပဲထင်တယ် :-)
ပါးစပ်ရာဇဝင်ကတော့ မှန်ပါတယ်၊ လစ်လျူလို့မရပါဘူး။ အပေါ်မှာပါတဲ့ ကိုတင့်ဦး (နဲ့ ဇီဇဝါက ကိုဝတုတ်တို့) ကိုလည်း သွားဆွေးနွေးစဉ်က ကျနော်ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီကနေ့ခေတ် သမိုင်းဆရာကြီးဆိုသူတွေကိုယ်တိုင် သူတို့ရဲ့ကောက်ချက်တွေကို စာဖတ်တဲ့သူ ချိန်ဆနိုင်အောင် ပါးစပ်ရာဇဝင်တွေနဲ့ တွဲပြီးဖေါ်ပြလေ့ရှိတတ်ကြတာ တွေ့မိခဲ့ရဖူးလို့ပါ။ နောက်ပြီးအပေါ်က ကိုတင့်ဦးပြောခဲ့သလိုပဲ ကမ္ဘာကျော်ကဗျာဇာတ်လမ်းကြီးကို မီးခိုးကြွက်လျောက်လိုက်ပြီး Troy မြို့ကြီးကို ပြန်တူးဖေါ်နိုင်ခဲ့တာမျိုးပေါ့။
စကားမစပ် ကျနော်တို့ သထုံနဲ့ခေတ်ပြိုင် ရှေးကရင့်မြို့ဟောင်း ၃ နေရာလောက်ကိုလည်း အခွင့်ကြုံရင် ဝါသနာတူသူတွေနဲ့အတူ ရှာဖွေဖေါ်ထုတ်ကြည့်ပါဦးမယ်။ အမှန်ကတော့ အနည်းဆုံး ၈ နေရာလောက်နဲ့ ထပ်တိုးဖြစ်နိုင်ချေ အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ အေးဗျာ မဆိုင်တာတွေ ပြောနေမိသလားပဲ။ ကိုဒေါင်းမင်းအနေနဲ့ သိထားတာလေးတွေကို ဝေမျှဆွေးနွေးသွားနိုင်ရင်လည်း ဝမ်းသာရမှာပါပဲ။
★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ September 28, 2010 at 2:51 AM
စစ်အဏာရှင်စံနစ် ပြုတ်ကျဖို့ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ တာဝန်သိမှုနဲ့ အရည်အချင်း အပေါ်မှာ မူတည်တယ်လို့ ယူဆတယ်။ ဦးသန်းရွှေ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၊ NLD နဲ့ ဒီမိုအုပ်စုတွေအပေါ်မှာ မမူတည်ဘူး။ မြန်မာလူမျိုးတွေက တာဝန်မဲ့နေမယ်.. အရည်အချင်းမရှိဘူးဆိုရင် ဘာမှ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ အရည်အသွေး ညံ့ဖျင်းတဲ့ ခင်ဗျားတို့ ၂ ယောက်ကို ဝေဖန်ခြင်းက လက်တွေ့ကျတယ်လို့ ယူဆတယ်။ မီဒီယာတွေက ဘာပြောပြောအကုန်ယုံတယ်။ မီဒီယာတွေက စကားလုံးတွေ ရွတ်ပြရင် ခင်ဗျားတို့က ကြက်တူရွေးလို လိုက်ပြီးအော်တယ်။ ဟုတ်လားမှန်လား ဘယ်တုံးကမှ မစဉ်းစားဘူး။ ခင်ဗျားတို့မှာ ဆေးမရှိတဲ့ ကြက်တူရွေးရောဂါ ခံစားနေရတယ်ဗျ။
အက်ဆစ်ဆောင်းပါးကို သံရုံးက ဘာသာပြန်ခိုင်းတယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ရဲ့လား ဦးဏှောက်သုံးပြီး စဉ်းစားပါ။ သံရုံးတိုင်းမှာ ဒေသဆိုင်ရာ ဘာသာစကားကနေ အင်္ဂလိပ်လို ပြန်ပေးနိုင်တဲ့ ၀န်ထမ်းတွေရှိတယ်ဗျ။ မြန်မာပြည်က သံရုံးတွေမှာ အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ပေးနိုင်တဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေရှိတယ်။ စာတစ်မျက်နှာပဲရှိတဲ့ အက်ဆစ်ဆောင်းပါးလေးကို အဲဒီ မြန်မာဝန်ထမ်းတွေကို ဘာသာပြန်နိုင် ပါတယ်ဗျာ။
သံအမတ်ဆိုတာ သံရုံးမှာ ရာထူးအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်။ သူ့အောက်မှာ ၀န်ထမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ သူ့လက်ထောက်လဲရှိတယ်။ ဆောင်းပါးလေးတစ်ခုကို ဘာသာပြန်ဖို့ သံအမတ်ကိုယ်တိုင် လုပ်ရတယ်ဆိုရင်.. ဖြစ်နိုင်သလားဗျာ? တခြားဝန်ထမ်းတွေ က အဲဒါလေးတောင် အားမကိုးရဘူးလား?
ဘလော့ပေါ်မှာ လူတိုင်းဖတ်နေတဲ့ ဆောင်းပါးလေးကို လူမသိသူမသိ ကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့နဲ့ သံအမတ်ခမျာ ဘာသာပြန်ခိုင်းရတယ်ဆိုပဲ။ ၀ါးဟားဟား…. ဘယ်သူ့ကို သံအမတ်ကကြောက်တာလဲ? သူတို့ပေးစာ ကမ်းစာ စားနေတဲ့ NLD အဖိုးကြီးတွေကိုကြောက်တာလား? သူတို့ကို ပထွေးတော်ခွင့်ရအောင် အမျိုးမျိုးကြိုးစားနေတဲ့ နအဖကို ကြောက်တာလား? ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. ကျုပ်တို့တွေက အက်ဆစ် ဆောင်းပါးကို ကြောက်ရွံ့ချင်းကင်းစွာနဲ့ဖတ်ခွင့်ရတာ.. ဂုဏ်ယူရမလိုဖြစ်နေပြီ။ ၀ါးဟားဟား
ကြက်တူရွေးရောဂါ ဖိဆီးခံနေရသော ခေတ်ပညာတတ်များကို သနားနေတဲ့
p.s သံအမတ်ကို ဒီစာအုပ်လေး ဖတ်ခိုင်းလိုက်ပါ
tint September 30, 2010 at 9:55 PM
ဖွတုန်းကဖွပြီး လစ်ပြေးတယ်လို့ တော့မထင်လိုက်ပါနဲ့ ဗျို့ 
မအောင့်နိုင်သော ဒုက္ခသစ္စာ (မဟုတ်သေးပါဘူး )
၂ပါတ်နားမယ် စိတ်ကူးတုန်းဘဲ ။ ချောမိနေလို့ခေါင်းထဲ သမိုင်းတွေ၊စာတွေ ခဏထုတ်
ကိန်းဂဏန်းတွေ ၊ manpower schedules , acqisition schedules တွေနဲ့နပန်းလုံးနေရပါကြောင်း
မန်းကိုကို September 30, 2010 at 10:49 PM
ဆရာတင့် = ဖွကိုကို :-)
နောက်တာပါဗျာ၊ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း သိပ်မအားလို့ လာသမျှလူစေ့အောင်တောင် ဧည့်မခံနိုင်ပါဘူး။
အပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့မိတ်ဆွေ “ဒေါင်းမင်း” တောင်မှ ကျနော်စာမပြန်နိုင်ခင် သူ့ကွန်မင့်ကို ပြန်လာဖျက်သွားတယ်။ သိုက်က ရတနာတွေရလာတာ ဥစ္စာစောင့်တွေသိမှာစိုးလို့လား၊ နိုင်ငံပြင်ပရောက်တုန်း နိုင်ငံရေးစကားတွေပြောတဲ့ (တိုင်းရင်းသား) ဘလော့တွေမှာ လက်ဆော့မှားမိမှာ စိုးရိမ်နေသလားပဲ :-D
ဆရာတင့်၊ ခုပဲ ဆရာတို့ Public Health in Myanmar ဆိုဒ်ကပြန်လာတယ်။
နောက်တာလား ဆရာရယ်၊ ကျန်းမာရေးဆိုဒ်မှာ နိုင်ငံရေးအတွေးအမြင် ဆောင်းပါးလင့်ကို သွားတင်ထားတယ်ဗျာ၊ တော်တော်ဆိုးတဲ့လူပဲ :-)
မန်းကိုကို October 2, 2010 at 12:23 PM
ဒါကတော့ ပိုစည်သွားအောင် ဆရာဘိုရဲ့ ဖေ့ဘွတ်မှာ ကျနော်လင့်တင်ထားပေးလို့ သွားမန့်ထားတာကို ပြန်ထည့်ထားပေးတာပါ။ အဲဒီမှာ ဆရာတင့်ရဲ့ အပေါ်က ကွန်မန့်ကြီးကို ပြူးနေအောင်ထည့်ပြီး ကိုယ့်ကိုဆော်ထားသဗျ၊ လာဖတ်သူတွေကို ကိုယ်ညံ့မှန်းသေချာအောင် လမ်းကြောင်းပေးချက်ကတော့ဖြင့် ကမ်းကုန်တယ် :-D
မိတ်ဆွေများအား အချွန်ဖြင့် “မ”လေသော လူထုဆရာဘို :-)
မြန်မာပြည်အတွက် အပြောင်းအလဲတော့ မျှော်လင့်ထားပါတယ် ဆရာရယ်၊ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူမှ မလိုချင်တဲ့ ခရောင်းလမ်းကို ဖြတ်ရမှာပါ။ အဲဒီလိုအခြေအနေကို တွန်းပို့နေတာကတော့ လူများစုပေါဗျာ။ အသေးစိတ်တော့ မပြောချင်ပါဘူး၊ ကိုယ်က ပုရွက်ဆိတ်ကလေးလောက် သာသာမဟုတ်လား။ မိုးပြိုမှာသိပေမယ့် ကိုယ်လည်းမတတ်နိုင်ဖူးလေ။ ပြီးရင် မိုးမပြိုလည်း မပူနဲ့ဆရာ ရေတွေက တက်လာပြီ။ အားလုံးရေစီးနဲ့ မျောကြမှာပဲ။